Ny mpandeha no mizaka ny vokany… : ny zandary manao ny ataony, ny mpitatitra manohy ny gaboraraka | NewsMada
Ny mpandeha no mizaka ny vokany… : ny zandary manao ny ataony, ny mpitatitra manohy ny gaboraraka
“Ny handraoka vola aminay fotsiny no ataon’ny zandary ; lasa masonkarena iray hafa mivoaka aminay mpitatitra izany…”, hoy ny fitarainan’ireo mpitatitra amin’ny kaoperativa, miasa amin’ny lalampirenena faharoa. Etsy ankilany, vokatr’izany, manohy ny gaboraraka eo amin’ny fomba fiasany koa ny mpitatitra sasany.
« Tsy atao hanara-maso ny fifamoivoizana ny fisian’ny zandary eny amin’ny lalam-pirenena maro manerana ny Nosy. Ny tena antom-pisian’izy ireo dia ny handraoka vola aminay mpitatitra na manara-dalàna na tsia ». Fitarainana nentin’ny mpamily iray io, miasa amin’ny lalam-pirenena RN2. Araka ny fanazavan’io mpamily io ihany, izay 20 taona niasana amin’ny RN2, masonkarena iray hafa ny vola alain’ireo zandary maro (mba tsy hilazana hoe izy rehetra) amin’ny mpitatitra zotra nasionaly na rezionaly. Lalana 30 km hatreo Manjakandriana fotsiny, sakana telo na efatra, atao amin’ireo kaoperativa, miampy ireo fiara vaventy mpitatitra vokatra na saribao avy any amin’ny distrikan’i Moramanga sy Manjakandriana.
« Fomba fotsiny ny hoe misava papier fa tsy fantatr’ireo zandary ireo akory na misy fiantohana na tsia ilay fiara ; na manana carte grise na tsia …Ny mahamay azy, ilay vola 1.000 Ar, 2.000 Ar atao vonona apetraka anatin’ireny papier-nay ireny. Ho an’ny sasany na feno aza ny fepetra rehetra, hitsongolohana izao rehetra izao hitakiana tsy latsaky ny 10.000 Ar», hoy ilay mpamily sendra anay.
Tsiahivina anefa, fa araka ny lalàna, kolikoly avokoa na ny ataon’ny mpanome, na ny ataon’ny mpandray.
Manao tsirambina ihany koa ny mpitatitra
Misy fiantraikany goavana amin’ny asan’ny mpitatitra ny fomba fiasan’ireo zandary amin’ireny lalam-pirenena ireny. Mety hitranga ny loza raha tsy ara-dalàna amin’ny lafiny teknika ilay fiara, nefa avela handeha ihany rehefa avy nanome vola. Araraotin’ireo mpitatitra hanaovana tsirambina ny fomba fiasan’ny zandary. Tsy misalasala mihitsy ireo kaoperativa milaza fa raha miakatra ny «sarany» alain’ny zandary amin’ireny lalana ireny, tsy maintsy mitady fomba hafa izy ireo hanentsenana izany, amin’ny saran-dalàna, indrindra ami’nizao fetin’ny Paka izao, fampitomboana ny isan’ny mpandeha na fitondrana entana tafahoatra. Fahavoazana iray goavana amin’ny sehatry ny fitaterana izany, ny mpandeha ihany no mizaka ny vokany !